सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखको हैसियतमा डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुखको उम्मेदवार नै बन्न नपाउने दाबी गरेका छन् । गुरुङले पछिल्लो समय मुलुकमा अनपेक्षित परिघटना भैरहेकोतर्फ सचेत गराए । उनले भने, “संसद अवरुद्ध हुनु दुखद् हो । संसद् यही तवरले अवरुद्ध भैरहे मुलुकको सिस्टममा गत्यावरोध हुनसक्छ ।’
सदनको गत्यावरोध हटाउनको लागि र सदन सुचारु गर्नको लागि सबै दल गम्भिर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यद्यपि उनले अहिलेको संसदको गत्यावरोध पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरे । “यो गत्यावरोध संवैधानिक अंगसँग सम्बन्धित छ,” उनले भने, “त्यसैले पार्टीले मात्रै निकास दिन सक्दैन ।”
गुरुङले अहिले सभामुख पद रिक्त रहेकोले त्यसको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको सुनाए । सदनमा बहुमत भएको नाताले सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने उनले बताए । उनले भने, “सबै हिसाबले सभामुख नेकपाले लिने कुरा उत्तम हो । तर, यसको लागि संवैधानिक बाटो खुलाउनुपर्छ ।” उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेकपाले आग्रह गरेको पनि उनले सुनाए । “उपसभामुखलाई पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन । आग्रहमात्रै गर्न मिल्छ । उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । पार्टीको कुनै ह्विप जारी गर्न मिल्दैन । मार्गप्रशस्त गर्न त उहाँले आफ्नो स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ,” गुरुङले थपे ।
संसदको डेडलक फुकाउनको लागि संसदको नियामावली फलो गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । संविधानले सभामुख नरहने परिकल्पना नगरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, “संविधानले कायममुकायमको पनि व्यवस्था गरेको छैन ।” उपसभामुखले अन्तरवस्तु आकर्षण गर्नेगरी बैठक बोलाउन नसक्ने उनको तर्क छ ।
उनले उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “उपसभामुख पदमा रहिरहेर सभामुखमा आफ्नो उम्मेदवारी दिन मिल्दैन । यदि उम्मेदवार हुन चाहेको भए उपसभामुखबाट अनिवार्य रुपमा राजीनामा दिनुपर्छ ।” उनले अहिले महिला वा पुरुषलाई सभामुख बनाउने भन्ने बहस नभएको सुनाउँदै घटनाक्रमले संकट आइपर्न सक्ने पनि बताए । “यस्तो अवस्थामा हामीले संवैधानिक व्यवस्था फलो गर्नुपर्छ,” उनले थपे ।
अहिलेको संसदको गत्यावरोध खुलाउनको लागि दुई वटा विकल्प रहेको सुनाउँदै गुरुङले भने, “कि त सर्वोच्च अदालतको फैसला तुरुन्त आउनुप¥यो, या त उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । पार्टीको आग्रह पनि उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न रहेको छ ।” संवैधानिक रुपमै सभामुखमा उम्मेदवारी दिने बाटो खुल्ला नभएकोले नेकपाले उम्मेदवार तय नगरेको उनको तर्क छ । उनले भने, “संवैधानिक संकटको समाधान हुनेबित्तिकै सभामुखमा जो भए पनि उम्मेदवार तय हुन्छ । पहिला संकट फुकाउनुपर्छ ।” ढिलो वा चाँडो उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि गुरुङको भनाइ छ ।
उनले संवैधानिक पदमा बसेर बार्गेनिङ गर्ने नैतिकता कसैलाई पनि नहुने र कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै त्यो कुरा स्विकार्य नहुने तर्क गरे । उनले भने, “यो फेयर पोलिटिक्स होइन ।” व्यक्तिका इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्नको लागि सदन अवरुद्ध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले उपसभामुख यथावत् रहेको अवस्थामा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन नपाउने पनि स्पष्ट पारे ।
गुरुङ सोमबार रिपोर्टर्स नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।